तिथि मेरो पत्रु » पार्टी एक Sensational एकल होस्टिंग दस कदम
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: Nov. 23 2020 |4मिनेट पढ्न
यो #1 एकल को गुनासो जताततै जहाँ नयाँ कसैलाई भेट्न जान छ. तिनीहरूले छौं चाहे 25 वा 65, ठाउँमा पट्टी दृश्य परे विपरीत सेक्स सदस्यहरू पूरा गर्न लागि एकल खोज सधैं छन्. एक भइ घर पार्टी फालिरहेका लागि यी कदम पालन र एक रोचक एकल दृश्य चरण को लागि सेट.
1. मिति: Midweek जमघट सप्ताह मजा लागि ठूलो तैयार हो. अतिथिहरु भविष्य गतिविधिहरु लागि नयाँ मित्र बनाउन एक मौका दिन्छ. सप्ताहांत पक्षहरूको मिति रात हो’ एकल हप्ताको. रोमान्स को लागि उच्च अपेक्षालाई पूरा गर्न तयार. यो स्त्री र पुरुष बीच चरम प्रत्याशा आफ्नो पार्टी मा पट्टी र कामुकता उठाउने.
2. निमन्त्रणा: इमेल सक्छ डे rigueur आज पार्टी भीड लागि तर केही उत्साह निर्माण को लागि एक अफलाइन अनुकूल निमन्त्रणा को VIP महसूस धड्किन्छ. पार्टी को आकार मा निर्भर गर्दछ तपाईं दुवै को मिश्रण प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ. आउन रात को रोचक तत्व मुद्रण निमन्त्रणा सिर्जना. एक सुस्वाद प्रणय दिवस उदाहरणका लागि, रातो पन्नी हृदय बक्से भित्र चहकिलो रातो रङ्गको लिपि मा एक सुन कागज मुकुट र पार्टी निमन्त्रणा राख्न. व्यक्तिगत 'राजा गर्न तार रिबन र ठेगाना संग जोड्छन्’ हृदय वा 'रानी।’
एक सस्तो पेच भरिएको स्थानीय स्थिर दोकान देखि सुनको जलप लगाइएको बक्से संग glam जानुहोस्, धातु कटा कागज, र पार्टी विवरण. आफ्नो मनपर्ने libation को एक बोतल संग आने गेष्टहरू निमन्त्रणा र मजा uncork।’
अथवा एक Cinco de Mayo पार्टी लागि मिनी sombreros खरीद र
एक तर्फ यस्तो लेखिएको छ जो एक ट्याग संलग्न 'आफ्नो टोपी अन्तर्गत यस नराख्नुहोस्।’ ट्याग को अन्य पक्ष मा, मुद्रण पार्टी विवरण. तपाईं केही निमन्त्रणा छुटकारा हात सक्छन् भने, पूर्ण आकार toppers प्रयोग र अवसर तिनीहरूलाई लगाउने गेष्ट निमन्त्रणा.
ठूलो जमघट लागि virally सन्देश फैलाउन Evite.com जस्तै एक अनलाइन सेवा प्रयोग.
सही अतिथि गणना प्राप्त गर्न एक फोन कल संग पालन गर्न भूल छैन र अन्तिम मिनेट विवरण व्यक्त गर्न.
3. सूची: कसले पहिले वाला निमन्त्रणा. अन्तरिक्ष को आकार र अनुभव को आधार मा तपाईं सिर्जना गर्न चाहनुहुन्छ. अन्तरिक्ष धारण संख्या मा आमंत्रित प्लस 20% एक सुखद क्रश हासिल गर्न. तपाईं कुनै मा टक्कर भने आफ्नो आँखा पूरा गर्न र तपाईं केहि भन्न छ. नमस्ते 'एक उत्साही’ सबै भन्दा राम्रो लाइन कहिल्यै आविष्कार छ. अतिथिहरु भएको मा योजना बस्न बनाम खडा, यो सम्मिश्रण सजिलो उत्प्रेरित गर्छ बनाउँछ. बढी आत्मीय कुराकानी लागि केहि रणनीतिक राखिएको बस्ने छ. तपाईं पाहुनाहरूलाई अझ घनिष्ठ च्याट लागि आफ्नो बेडरूम शीर्षक चाहँदैनन्.
पनि सकेसम्म विपरीत सेक्स को संख्या राख्नुहोस् तर पनि धेरै बाहिर जोड छैन. महिला प्रारम्भिक rsvp गर्न जान्छन् सम्झना. अन्तिम मिनेट त एक टेस्टोस्टेरोन पार्टी को दिन बढन आशा सम्म पुरुष अक्सर योजना बनाउन छैन. संख्या बाहिर भर्न आफ्नो अन्य एकल निम्तो गर्न मित्रहरुलाई प्रोत्साहन दिनुहोस्.
4. दृश्य: एक va-va-va-voom वैलेंटाइन्स रातो भावुक रंगहरु मा उत्सव प्रेम सिर्जना, बैजनी, वा गुलाबी. परम्परागत हृदय र फूल छोड्नुहोस्. पंख boas र पंख ticklers संग ठूलो गिलास vases भरण. जस्तै ध्रुवीय मुद्रित टीजर: 'मलाई मनपर्छ', 'ड्रेसअप प्ले आऊ', 'यो बोआ मा यो दोष', तपाईं यो अर्थ जस्तै 'Flirt’ र 'मेरो साथ नृत्य’ कोठा वरिपरि मैनबत्तीमा votives चंचल नजिकै.
5. I.D. आवश्यक: यो सजिलो मान्छे पूरा गर्न लागि बनाउन – खाना लागि ____ हुनेछ 'जस्तै आकर्षक वाक्यांश संग छापिएको खाली बटन चुलबुला नाम ब्याज सिर्जना’ , 'एक रात को लागि मात्र म छौँ ______’ , 'मलाई भेट्नुहोस्, म _______ छु’ 'लागि इश्कबाजी हुनेछ _____’ '_____ एउटै खोजी।’ अतिथिहरु रिक्त मा भर्न र स्थायी मार्कर संग उनको नाम लेख्न. अथवा आफ्नो जानकारी को लागि पार्टी विषय र अन्तरिक्ष संग VIP पास lanyards सिर्जना. एक ठूलो पार्टी स्मारिका रूपमा डबल कर्तव्य गर्छ.
बित्तिकै एकल को ñ सबै भन्दा ठूलो डर आउनुहुन्छ प्रत्येक अन्य गेष्ट परिचय गर्न सुनिश्चित 'म कुनै थाह छैन।’
6. मजा कारक: Icebreakers प्रमुख हो. अन्य एकल संलग्न गर्ने प्रयास गर्दा एकल अक्सर शब्दहरू लागि एक हानि मा हुन लाग्न. तिनीहरूलाई कुरा केही दिनुहोस्. विषय 'खेल्ने खेल हो चाहे’ र तपाईं भांजनेवाला पानाहरू र एकाधिकार बोर्ड पर्खाल सजावटको. अनि icebreaker 'आफ्नो कदम बनाउन गेष्ट आवश्यकता’ अन्य partygoers देखि खेल टोकनहरू एकत्रित गरेर.
अथवा 'एकल बिंगो’ जहाँ प्रत्येक व्यक्ति अन्य अतिथिहरु रोचक तथ्य संग एक खेल कार्ड प्राप्त. खेल को उद्देश्य बोर्ड मा वर्णन फिट व्यक्ति पाउन छ. विजेता हस्ताक्षर आफ्नो बोर्ड कवर.
अथवा अधिक 'परम्परागत दिन’ पागल र बोल्ट खेल एक मोड. आफ्नो स्थानीय हार्डवेयर पसल मा मिश्रित शिकंजा र बोल्ट उठाओ. महिला शिकंजा दिनुहोस् र व्यक्तिहरू तिनीहरूको खेलमा फेला पार्न प्रयास रूपमा मानिसहरूले बोल्ट गन्जागोल र रसायन वृद्धि हेर्न. प्रतिस्पर्धा आत्मा सधैं मानिसहरूलाई खिच्छ.
7. पेय: एक हस्ताक्षर पेय सिर्जना. यो एक ठूलो कुराकानी स्टार्टर छ. पाहुना बन्द पूर्ण पट्टी को भार र खर्च लाग्छ. तपाईं विवश मा पहिल्यै मनगढंत नलिनुस् सक्छ. सस्तो बरफ बाल्टिन को एक रंगीन संग्रह प्राप्त र अतिथिहरु बरफ थप्न गरौं र आफूलाई सेवा. बनाउन घरमा साँझ Relive गर्न चाहनेहरूका लागि पेय नुस्खा कार्ड माथि मुद्रण गर्न निश्चित. अनि पक्का छ पार्टी चर्चा पछि आफ्नो बारटेंडिंग प्रतिभा उल्लेख.
8. खाद्य: आफ्नो बनाउन सबैभन्दा मजा खाना विचारहरु परिचारिका हुन अर्को सजिलो तरिका हो. अतिथिहरु आफ्नै shish kabobs अनुकूलित होस्, औंला खाना wraps, वा आइसक्रिम sundaes, तिनीहरूले आफ्नो सृष्टि टिप्पणीहरू तुलना रूपमा तिनीहरूलाई लागि तपाईं को लागि कम काम र अधिक अन्तरक्रिया अर्थ.
कोठा भर रणनीतिक राखिएको मिनी-काटन पनि एकल सदा ठूलो हो. तिनीहरू भोकाएका छौ तापनि, एक स्वादिष्ट निवाला पनि टाढा कहिल्यै छ भने तिनीहरू ठूलो जडान तोड्न छैन. तिनीहरूले कुराकानी उम्कन आवश्यकता महसुस गरिरहनु पनि भने, तिनीहरूले नमूना छैन जो कोठा भर मिठाई तालिका लागि एक रन बनाउन.
9. संगीत: ध्वनि व्यवस्थापनमा संलग्न. पहिलो आगमन लागि माथि मात्रा पम्प. संगीत खाली ठाउँ भर्न र पार्टी अहिलेसम्म सुरु भएको छैन भन्ने सोचेर देखि प्रारम्भिक अतिथिहरु राखन हुनेछ. संख्या पक्का वृद्धि तपाईं तल मात्रा बारी. एक ठूलो छाप गर्दा तिनीहरूले संगीत संग प्रतिस्पर्धा गर्न आवश्यकता महसुस हुँदैन.
माथि-गति स्पन्दन को पक्ष मा ढिलो जाम छोड्नुहोस्. तिनीहरूले आफ्नो कम्मर मा एक सानो प्रभावित बनाइदिन्छ नाच छैन छौं तापनि सबैको ओठ बढी आकर्षक र सजिलो हेर्न.
10. यस समापन: तपाईं रणनीतिक खाली कागज र कलम मिल्यो अन्तरिक्ष भर राखिएको छु सुनिश्चित. अन्तमा त्यहाँ रही र सम्झौता मुहर गर्न उचित उपकरण भएको छैन भन्दा केही झन् खराब छैन. तपाईंको पाहुनाहरूलाई यति विचारशील भएकोमा धन्यवाद मनमनै हुनेछ.
बोनस: पार्टी दृश्य पछि: क्षेत्र तयार गर्न सकिन्छ-तपाईं-प्राप्त-मलाई-आफ्नो वा-उनको-नम्बर आवाज मेल. तपाईंको अतिथिहरु पक्कै दिएसलाई बनानेवाला रूपमा आफ्नो नयाँ भूमिका मा तपाईं त्याग्नु हुनेछ. तपाईं हुलाक कार्यालय खेल्न र साथ सन्देशहरू पारित तर अतिथिहरु प्रकट छैन सक्छन्’ व्यक्तिगत जानकारी जतिसुकै केही तपाईं पाटीर्ह सँगै हौं.
प्रेम समस्याको आउट राख्न सक्नुहुन्छ कसरी?